Tag: tababarka suuq geynta dijitaalka | Martech Zone
Tag: tababarka suuq-geynta dijitaalka ah
Axad, Janaayo 24, 2021 Axad, Janaayo 24, 2021 Douglas Karr
Qoraalku wuxuu ku yaallay darbiga warshadaha suuq geynta ee dhijitaalka ah markii faafida faafay, qufulada la garaacay, dhaqaaluhuna markiisa u wareegay. Waxaan ku qoray LinkedIn maalmahaas hore in suuqleydu u baahnaayeen inay damiyaan Netflix oo ay isu diyaariyaan caqabadaha soo socda. Dadka qaarkii way sameeyeen… laakiin, nasiib daro badankood ma aysan sameynin. Shaqo ka cayrinta ayaa sii wadaya inay ku dhex faafto waaxaha suuq geynta dalka oo dhan. Suuqgeynta dhijitaalka ahi waa xirfad soo jiidasho leh oo aad laba ka heli karto